Ampidino GRID Autosport ho an'ny Windows
Ampidino GRID Autosport
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (39.00 MB)
Ampidino GRID Autosport,
GRID Autosport no lalao farany aminny andiany GRID novolavolaini Codemaster, fantatra aminny traikefany aminny lalao hazakazaka.
Ao aminny GRID Autosport, izay iray aminireo ohatra mahomby indrindra aminny sokajy lalao hazakazaka, ny mpilalao dia miditra aminny karier-dry zareo manokana ary mandroso tsikelikely aminny tohatra asa. Ny tanjonay voalohany aminny lalao dia ny handresy ireo hazakazaka hisarihana ny sainny mpanohana sy handray anjara aminny hazakazaka vaovao ary hamaha fiara vaovao miaraka aminny fanohananny mpanohana. Ao aminny GRID Autosport, ny mpilalao dia afaka manampahaizana manokana aminny fomba iray ary koa manaporofo ny fahaizany aminny sehatry ny fahaizana manokana.
Ireo fiara azontsika ampiasaina aminny GRID Autosport dia voasokajy aminny sokajy 5 samihafa. Ankoatry ny fiara mahazatra hitantsika eny an-dalana dia afaka mitondra fiara fanatanjahan-tena lafo vidy isika, fiara maotera na fiara novaina. GRID Autosport dia manana racetracks tena izy, ao anatinizany ny Istanbul Park. Ho fanampinizany, ny hazakazaka voafaritra lalao dia manatsara ny fanangonana racidack GRID Autosport.
Ao aminny GRID Autosport, izay ahafahanao mitondra fiara 78 samy hafa aminny fitambarany, ny sary avo lenta dia ampiarahina aminny faharanitan-tsaina voajanahary. Azonao atao koa ny milalao ny lalao aminny multiplayer aminny Internet. Ireto avy ny fepetra takiana aminny rafitra GRID Autosport:
Windows Vista, Windows 7 na Windows 8 rafitra fiasa
Intel Core 2 Duo na AMD Athlon X2 5400+ efa niasa taminny 2.4 GHz
Karatra sary Intel Series HD3000, AMD HD2000 na Nvidia GeForce 8000
Fifandraisana aminny Internet
15GB fitehirizana maimaimpoana
Karatra feo mifanaraka aminny DirectX
Haben'ny rakitra: 39.00 MB